u-250 kaMorkel owokukhandleka nokuzimisela
uMorne Morkel uzolikhumbula usuku lapha athole khona i-wicket yakhe yesi-250 yamaTest njengosuku lokukhandleka kanye nokuzimisela ngosuku lwesithathu lomdlalo wesithathu weTest bedlala ne-New Zealand eSeddon Park eHamilton ngoMsombuluko. Le-seamer ende ibe umdlali wesithupha ophosayo ukufinyelela lapha, ehlangana noShaun Pollock (421), uDale Steyn (417), uMakhaya Ntini (390), uAllan Donald (330) noJacques Kallis (291) kuhlu lama-all-time wicket-takers.
uMorkel wadlala kahle kumdlalo wakhe wokuqala eneminyaka engu-22 ebhekene neqembu lase-India eliphethe abadlali abafana no-Virender Sehwag, uRahul Dravid, uSachin Tendulkar, uVVS Laxman, uSourav Ganguly noMS Dhoni, njengoba sekudlule iminyaka engu-11, ubhekene nokutakula iqembu lamaProteas njengoba kusele izinsuku ezimbili kumdlalo weTest.
“Beku usuku olunzima ngaphandle,” uMorkel ekhuluma ngalokhu akukhumbulayo. “I-outfield ibisinda njengoba kunethile, sizebenze kanzima, kodwa ngihleli lapha ebusuku ngijabulile ngomdlalo wami ngebhola. Uma ngicabanga iminyaka engu-11 edlulile ngizophosela uSachin (Tendulkar) kwi-over yami yokuqala, ngangithukile, futhi ukucabanga ama-wicket angu-250 kuyangijabulisa lokho.”
Abashaya phezulu kwi-New Zealand baveze ukushaya ngokubekezela kanye nokulalela kulandela ukudlala kabi eWellington, i-innings imiswe kahle ukapteni, uKane Williamson, ungaphumile eku-148. uWilliamson usayi-wicket ebalulekile uma amaProteas ezimisele ngokubuyisela umdlandla ngakubona, ikakhulukazi njengoba isikhathi sincane emdlalweni.
“Bayiqembu elisezingeni eliphezulu, banabadlali abasezingeni eliphezulu,” kusho uMorkel ekhuluma ngokushaya kwe-New Zealand. “Ngaphambili bashiye kahle, badlale umdlalo wokubekezela futhi balinde thina ukuthi sihlasele kanye nokuphosa okuqondile ukuze bathole ama-runs. I-wicket isithambile, uma ibhola liphelelwa ukuqina, kulula ukuthola ama-runs. Angeke ngithathe lutho ngendlela abaphose ngayo, uKane ebemangalisa futhi abavula umdlalo badlale kahle.”
“Ngokoqobo, basidlulile,” ekhuluma ngesimo somdlalo. “Lilodwa iqembu elingaphansi kwencindezi, ithina labo. Kuzomele sibuye nesimo somqondo esilungile kusasa, futhi kwi-innings yesibili, kuzomele abashayayo bashaye impela. Bazoza ngamandla kithina kwi-innings yethu yesibili ukuze banqobe.”
“Njengeqembu, kwigumbi lokushintsha, sihlezi sikhuluma ngokuthi sifuna ukuqina ngomqondo nokuthi kuzoba indlela enhle ukuthi siqede ikhalenda yekhilikithi uma sibambelela.”
i-New Zealand izoqhubeka ne-innings yayo iku-321/4 bengaphambili ngama-runs angu-7. Umdlalo kumele uqale ngo-10h30 eNew Zealand (23h30 SAST).
uDe Kock uqhube umsila wamaProteas Siningi isikhathi kumdlalo - uAmla uAmla ugqamisa usuku oluguqubele ngokuthola u-50 AmaProteas aqonde ukuqeda ihlobo elinempumelelo engaphezulu uPhilander ujabulela ukubuya kwinkundla emnika inhlanhla AmaProteas ahlula amaBlack Caps kusele izinsuku ezimbili Ithemba nenhlanhla kusiza uDuminy Ama-wicket asekugcineni ashiya womabili amazwe egculisekile AmaProteas alungiselela ukubeka yonke into encupheni kwiTest yesibili Imvula ithatha usuku lokugcina eDunedin uElgar noDu Plessis bagcina amaProteas ehamba phambili